Wholesale Vertical Glass Model ine Dual Suction 740 Manufacturer uye Supplier | ARCAIR
Vertical Glass Model ine Dual Suction 740
Mhando dzemavara egirazi panhizha optioanl Special DC mota ine yakakwira yekusveta simba uye yakaderera ruzha 3 venting kumhanya nekubata kubata ine 1 dijitari kuratidza.
Nzira mbiri dzeVentilation Optional: kudzokorodza mukati nemafirita emarasha kana kudhiza pamusoro nepombi yekuburitsa.
Chiedza che LED chinoramba chichishanda kwemaawa 30,000.
Dishwasher yakachengeteka aluminium girisi sefa.
Special design ine vertical shape
Mhando dzepaneru dzakaita segirazi,ceramic,huni dzekusarudzika kuti dzienderane nemhando dzakasiyana dzekicheni dzinoda 90W DC mota ine yakakwira yekusveta simba 650m3/h munhanho nhatu,zviri nyore kubvisa mafuta nekunhuhwirira,kuchenesa mweya mutsva uye kuchengetedza mhuri ine hutano. Dual suction-pasi nemberi zvese nekupomba mweya uri nani Kudzika kweruzha - sehurukuro yakanyarara pakati pemhuri. Kubata kutonga ne 1 dhijitari kuratidzwa, kushanda kuri nyore kusangana kwakasiyana kudiwa kwekubika Kudzika ne 233.5MM chete, kuenzanisa kabati uye inotaridzika yakakwira mukicheni. 400+400mm chimuney chinogadziriswa, zvakanaka kusangana nehurefu hwakasiyana hwekicheni sirin'i Inoshandiswa nearuminiyamu inogezesa girisi mafirita nyore kuisa uye kutsiva Operating Mode.
Nekuchinjika sarudzo pakati pekudzokorora kana mhepo yakananga kuneta.
1. Recirculating mode: Mafirita emarasha anodiwa kana nzvimbo yako isingabvumirwi kuisa pombi yekunze yekunze. Inotsiviwa mwedzi miviri kusvika ku4 zvichienderana nekushandisa frequency. sefa yemarasha.
2. Yakananga mhepo inopedza simba mode: Inoshandiswa se ducting vent cooker hood ine duct pombi 150mm mudhayamita. Yedu yekubikira hood pamwe chete nepombi yepombi mu1.5M kana 2M, iwe zvakare unogona kuitenga semasara ezvipfuyo zviri nyore kubva kuzvitoro unongoda nedhayamita chaiyo.
Maviri 1.5W mwenje we LED akaiswa akananga pazasi peyekubikira uye unoona zvirinani kana uchibika uye unogona kujeka murima. LED iri nyore kutsiva uye inogona kuramba ichishanda pamusoro pe30,000 maawa
Material: Muviri wependi chena, ceramic yekupedzisa pani
Kuyerera kwemhepo: 650 m³/h
Motokari Type: 1x90W-DC mota
Kudzora Type: Bata control
Kuvhenekera: 2 × 1.5W mwenje we LED
Sefa Rudzi: 2pcs Aluminium sefa
Kuwedzera kwechimuni: 400+400mm
Kurodha QTY(20/40/40HQ): 96/216/270 (60cm)
Ruvara: Muviri wependi nhema / Muchena
Gadzirisa ceramic yekupedzisa pani
Chinja: LCD kubata kutonga, Remote control
Sefa basa: Marasha sefa / VC sefa
Yakanakisa Girazi Yakazara Angled Hood 723
90cm Yakakwirira End Kubata Kudzora Angled Hood 706
Bata Kudzora Angled Cooker Hood 60cm 736A
90cm Auto Vhura uye Vhara Yakagadzirwa Angled Hood 701
Yepamusoro Yakagadzirwa RGB Angled Hood 728
60cm Angled Wall Yakaiswa Cooker Hood 725